Bogga ugu weyn / blog / Dib-u-habeynta Musqusha, 5 Garaacis Si Loo Gaaro Isbadal Aad U Qurux Badan
2021 / 04 / 10 Qoondayntablog 2765 0
Haddii aan dhahno aagga guriga waa midka ugu adag uguna qaalisan in dib loo habeeyo, musqusha waxaa suuragal ah in marka hore lagu xiro jikada. Ma dooneysaa inaad ku abuurto dareen ah kala-sareynta musqusha, laakiin aadan rabin inaad sameyso heshiis weyn, waa maxay habka ugu fudud oo fudud ee loo sameeyo? Arrintan, waxaan ku takhasusay qurxinta musqusha, xitaa iyada oo aan lahayn barkadda musqulaha, muraayadda marmarka iyo muraayadaha waxtarka leh ee qadiimiga ah, waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa shantaan tabaha yaryar si aan u cusbooneysiinno musqusha.
Weli waxaad u isticmaaleysaa sanduuqa saabuunta balaastigga ah ee foosha xun saabuun? Ha u noqonin sidaan oo kale jidadkaaga. Maacuuntaas raqiiska ah iyo kuwa ceyriinka ah waa la iska tuuri karaa waxaana lagu beddeli karaa ururintaada oo dhan dhammaan weelka wanaagsan ee u muuqda.
Dhalooyinka wanaagsan ee suufka iyo kubbadaha suufka ah, iyo suxuunta jilicsan ee yar yar ee saabuunta sidoo kale aad ayey ugu habboon yihiin. Inta ugu wanaagsan oo dhan, ku wada wada rido saxan kaydinta oo nacasnimadaadu wax badan bay ka sii fiicnaan doontaa. ▼
U adeegso madaafiic yar oo dhagax ah si aad ugu kaydiso burushyada xoqidda ama kubbadaha lagu maydho. ▼
Weelasha waaweyn iyo taarikada yar yar ayaa si wanaagsan loo isticmaali karaa. ▼
Haddii aadan rabin inaad ku qoyso guriga oo dhan, gogosha musqusha ee aan sibiibix ahayn waa lagama maarmaan, maadaama nadaafadda iyo macaanku yihiin aasaaska. Haddii aad rabto inaad ka dhigto musqushaada mid qurux badan, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ku bedesho doorka gogosha aan simbiriirixan lahayn roog fiican. ▼
Miyaad ka walwalsan tahay in rooga marwalba uu qoyan yahay oo si fudud loo abuuri karo caaryada iyo caariyaysi? Kadib shaqo fiican samee kala saarida qoyan iyo qalalan, ka dibna maydh oo si joogto ah u beddel! ▼
Muraayadaha wax aan waxba tarayn ee musqusha waa waxyaabaha muhiimka ah ee ka tarjumaya muuqaalka. Haddii muraayaddu aad u khafiif tahay, waxay lahaan doontaa dareen guri kiro ah. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la doorto muraayad labbisan oo xarrago leh.
In kasta oo saxanku aad u fudud yahay, laakiin leh muraayad dhar u eg yurub oo qaab-guris ah, booska oo dhan wuxuu noqday dareen tayo leh. ▼
Muraayad afar-geesle ah oo fudud oo deeqsi ah oo leh qaab alwaax ah, midabka asalka ah ee qoriga ah ee qaabka iyo midabka asalka cad ee asalka ahi midba midka kale si xarago leh ayuu isu dhammaystirayaa. ▼
Haddii aadan iibsan karin muraayad ku habboon, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad DIY ku sameysato xarig caws leh. ▼
Dahab ama naxaas ah waa aristocratic waxaana loo isticmaali karaa in lagu xoojiyo dareenka weynaanta si wax ku ool ah. Aaladaha iftiinka oo leh dahab dhalaalaya oo dhalaalaya waxay umuuqdaan kuwa sharaf leh oo dhedig ah, halka asalka madow oo leh dahab mugdi culus leh sharaf iyo jawi. Qalabka musqusha iyo muraayadaha muraayadaha ayaa ugu habboon dahabiga, badeecada hal khuseysa sidoo kale way fududahay in la iibsado.
Asalka cad ee saafiga ah, taabashada dahabka dhalaalaya ayaa soo jiidasho leh. Si kastaba ha noqotee, haddii boosku mugdi yahay, walxaha fudud ee dahabka dhalaalaya ayaa si fudud lumaya asalka. ▼
Marka sooyaalka boosku mugdi yahay ama iftiin iyo mugdi is dhexgaleen, xulashada dahab waxyar ka culus ayaa u muuqan doona mid ka sii adag. Isla mar ahaantaana, noocyo ka kooban waxyaabo dahab ah oo leh dardar badan, laakiin sidoo kale ka soo jeeda asalka si loo muujiyo sameynta dareenka kala sarreynta. ▼
Qoysas badan ayaa iska indha tira xulashada nalalka musqusha. Isticmaal baarka qubeyska halkii aad ka isticmaali laheyd nalalka kore, ama ku isticmaal qaanadaha waxtarka leh isha iftiinka u gaarka ah halkii aad ka isticmaali laheyd nalalka derbiga, oo aan ahayn wax been ah. Dareenka horumarsan ee booska wuxuu ka yimaadaa feejignaanta faahfaahinta, laambado si fiican u muuqda iyo laambado ay keeneen tayada wax-soo-saar, hubaal waa mudan tahay in laga fikiro.
Hal nuur oo weyn + dhowr nal oo yaryar, ilo iftiin badan si loo abuuro jawi soo jiidasho leh. ▼
Laydhka saqafka sare ee joomatari-gareedka qaabeeya waa mid quruxsan oo aan aad u dhib badanayn. ▼
Haddii musqushaadu ay ballaadhan tahay, dooro muraayad qurux badan, muraayad ballaadhan oo qaabab isku dhafan leh, oo isbarbar dhig xaashida iyo shimbiraha iyo ubaxyada si dhakhso leh loogu abuuro dareen khiyaali ah. ▼
Nalalka derbiga oo khafiif ah oo xarrago leh. ▼
Haddii aadan rabin inaad burburiso fudaydka afarta darbi, waxaad isticmaali kartaa nal yar oo iftiimiya halkii aad ka isticmaali lahayd laambadda gidaarka. ▼
Qubaysku sidoo kale waa nasasho, iftiinka oo badana wuxuu dadka ka dhigaa kuwo aad u soo jeeda. Haddii aad rabto inaad ku nasato xawaare qunyar socod ah, iftiin shumac isla markaana ku raaxayso waqti jacayl gaar ah oo qubeys ah. ▼
Hore:: “Qiimaha Sare” ee Musqusha, Oo Aad U Yaab Leh, Ma Jiraa Nooca Ugu Fiican Maskaxdaada? Next: Sidee Loogu Rakibaa Aagga Musqusha Meel Ficil Ah? Ka Bilow Afartan Dhinac, Si Aad U Xaqiijiso Fiirintaas Fiican Iyo Adeegsiga Wanaagsan!
2021 / 07 / 19 788
2021 / 05 / 28 3122
2021 / 04 / 22 4633
2021 / 04 / 22 3762
2021 / 04 / 21 3689